Xog dheeri ah oo Aan idiinkaga hayno safarka madaxweyne Xasan ee Addis-Ababa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xog dheeri ah oo Aan idiinkaga hayno safarka madaxweyne Xasan ee Addis-Ababa
Warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan Socdaalka maanta uu Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalia Xassan Sheekh Maxamuud ku aaday Dalka Ethiopia.
Socdaalka Madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu yahay mid ku qotoma ka qeybgalka shirka Madaxda Afrika ay uga hadli doonaan qalalasaha ka taagan wadanka Koonfurta Sudan.
Kulanka ka dib ayaa waxaa la filayaa in Madaxweynaha uu si gaar ah ula kulmi doono Madaxweynaha Ethiopia, Ra’isulwasaare Hailemaraim Desalegn, madaxda IGAD, iyadoona halkaasi lagu falanqeyn doono Khilaafka Xassan iyo C/weli sheekh.
Hailemaraim Desalegn ayaa dhabarka u dhigtay in natiijo wanaagsan uu ka keeni doono Khilaafka labada mas’uul waxaana Hailemaraim uu si gaar ah culeyska u saari doona inuu hal meel isugu geyn doono labada mas’uul.
Warar hoose ayaa sheegaya in shirka kadib Ra’isulwasaare C/weli uu gaari doono Magaalada Adis ababa halkaasi oo ay taallo gogol nabadeedka lagu xalinaayo Khilaafka sii baahaya ee Xassan iyo C/weli u dhexeeya.
Dhanka kale, Arrintaani ayaa waxa ay kusoo beegmeysaa xili dhawaan uu R/W C/weli sheegay in Khilaafkooda lagu xalin doono Magaalada Adis ababa ee cariga dalka Ethiopia.